China TLN Wall Mount Voltage Stabilizer စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ထိုင်ပေ
TLN မြို့ရိုးကိုစီးရီးတောင်ပေါ်မှာ relay ထိန်းချုပ်မှု ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှအမေရိကန်ချစ်ပ်ကိုရွေးချယ်သော AC automatic voltage stabilizer သည်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး၏လည်ပတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကွန်ပျူတာ digitization လုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ TLN စီးရီးဖြင့်တပ်ဆင်ထားသော AC voltage stabilizer သည်မူရင်း TSD အမျိုးအစား၏အခြေခံတွင်တီထွင်ထားသောထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောဗို့အားတည်ငြိမ်မှု၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
TLN သည်မြင့်မားသော voltage စည်းမျဉ်းတိကျမှန်ကန်မှု၊ အားကြီးသော overload capacity၊ ကောင်းမွန်သောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြင်းထန်သော anti-interference စွမ်းရည်၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ။ ၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ အသံတိတ်၊
၎င်းသည်ကွန်ပျူတာများ၊ ကူးစက်များ၊ ပရိုဂရမ်ထိန်းချုပ်ထားသောတယ်လီဖုန်းဖလှယ်မှုများ၊ စက်မှုဆိုင်ရာတိကျသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊
၁ ။ကျယ်ပြန့်သော input voltage: AC 140 ~ 260V သို့မဟုတ် 100-260VAC သို့မဟုတ် Customize
2.High နည်းပညာ: ကွန်ပျူတာဖြင့်ပရိုဂရမ်မာထိန်းချုပ်ထားသည်
3. ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း:LED မျက်နှာပြင် အရာအားလုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
၄။ အရည်အသွေးအာမခံ: မိမိကိုယ်ကိုလုပ်သောအဓိကအပိုပစ္စည်း၊ ထရန်စတာ၊ ပီစီ။
၅ ။ပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် - အလွန်အမင်း / အနိမ့်ဗို့အားကာကွယ်မှု၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊
၆။ ရွေးချယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် - ဗို့အားထိန်းညှိနှင့်အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်နှစ်ခုဖြင့်ထုတ်လုပ်သောဗို့အားရွေးချယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်၊ အဓိကထောက်ပံ့မှုတွင်တည်ငြိမ်သောရာသီတွင်အသုံးပြုသူသည်ဗို့အားတည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ထားနိုင်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမရှိပါ၊ စီးပွားရေးနှင့်အဆင်ပြေပါသည်။
၇ ။မြင့်မားသောထိရောက်မှု: 95% ကျော်
မော်ဒယ် TLN-1000 TLN-2000 TLN-3000 TLN-5000 TLN-10000
ပါဝါ 1000VA / 600W 2000VA / 1200W 3000VA / 1800W 3000VA / 1800W 5000VA / 3000W
နည်းပညာ CPU ကိုအခြေခံသော Digital Circuit
အညွှန်းကိန်း LED ဂရပ်ဖစ်
ပြသမှုအခြေအနေ အလုပ်လုပ်, အချိန်နှောင့်နှေး, ပျက်ကွက်
input ကို ဗို့အား AC 140 ~ 260V သို့မဟုတ် 100-260VAC ဒါမှမဟုတ် customize လုပ်ပါ
ကြိမ်နှုန်း 50/60 Hz
ရလဒ် ဗို့အား 220Vac 110Vac
တိကျစွာ +/- 10%
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အပူလွန်ကဲခြင်း ဟုတ်တယ်
တိုက်နယ်ကာကွယ်မှု ဖျူး / Circuit Breaker / Air Break Switch
နှောင့်နှေးအချိန် 6/120 စက္ကန့်
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများ အီး, EN60950, En55024
operating အခြေအနေများ Operating အပူချိန် 0-40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဆွေမျိုး Humidit operating 10% RH ~ 95% RH, Non- ငွေ့ရည်ဖွဲ့
သိုလှောင်အပူချိန် -5 ° C-45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အသွင်အပြင် AVR အရွယ်အစား (mm) 304x199x68 304x 199 × 68 367x247x95 367x247x95 420x290x120
AVR ဘ (ကီလိုဂရမ်) ၄.၈6၁၂.၅ ၁၅.၅ 20
၁။ Network input ၏ဗို့အားသည်အကောင်းဆုံးလည်ပတ်မှုအတွက် AVR ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရမည်။၂။ ပလပ်များအားလုံလုံခြုံခြုံချိတ်ဆက်ပါ။၃။ အမြဲတမ်း AVR ပါဝါခလုတ်ကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ပါ၊ အလှည့်ပစ္စည်းပါဝါပါဝါကိုဖွင့်ပါ။ (ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက AVR ဖျူးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်)အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် Overload အခြေအနေရှိလျှင်မသုံးပါနှင့်။၅။ အလွန်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်မီးလောင်လွယ်သောအစားထိုးပစ္စည်းများတွင်မသုံးပါနှင့်။ မည်သည့်အရည်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။6. အောက်ပါပုံနှင့်ပုံအဖြစ် output ကိုစွမ်းရည်နှင့် input ကိုဗို့အားအကြားဆက်ဆံရေး:
ရှေ့သို့ TLB အမှတ်တရတောင်ပေါ်တွင်ဗို့အားတည်ငြိမ်စေသော
နောက်တစ်ခု: TLS အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးအစား relay အလိုအလျောက်ဗို့အားတည်ငြိမ်စေ (LED Meter)
TDGC2J နှင့် TSGC2J ဗို့အား Regulator
SDVC10-S: 4A Voltage Regulator Controller
SVC-C အလိုအလျောက်ဗို့အားတည်ငြိမ်စေသော LED မီတာ ...
SVC-8KVA တစ်ခုတည်းအဆင့် Servo အမျိုးအစားဗို့အားတည်ငြိမ် ...
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ သိကောင်းစရာများ - Featured ထုတ်ကုန်များ - Sitemap - မိုဘိုင်းဆိုက် Amplifier သည်ဗို့အားတည်ငြိမ်စေရန်, Ac များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗို့အားတည်ငြိမ်စေ, 4kva ဗို့အားတည်ငြိမ်စေခြင်း, 2kva ဗို့အားတည်ငြိမ်စေ, အိမ်တစ်အိမ်လုံးအတွက်ဗို့အားတည်ငြိမ်စေခြင်း, ဗို့အားတည်ငြိမ်စေသည့် 5000va, ထုတ်ကုန်အားလုံး